जिल्लाभित्र जारी गरिएका सवारी पास पनि खारेज, कहिलेदेखि लागु हुन्छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more जिल्लाभित्र जारी गरिएका सवारी पास पनि खारेज, कहिलेदेखि लागु हुन्छ ?
जिल्लाभित्र जारी गरिएका सवारी पास पनि खारेज, कहिलेदेखि लागु हुन्छ ?
जेठ १ गते, २०७७ - १७:५८
काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधन चलाउनका लागि यसअघि जारी भएका सबै पास रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट जारी भएका सबै पास गृह मन्त्रालयले खारेज गरेको छ ।यो नियम आगामी शनिबारदेखि लागू हुने भएको छ ।
अबदेखि लिइने पासहरु गृह मन्त्रालयको अनुमतिमा मात्रै जारी गरिने छ । प्रेसको हकमा सूचना विभागबाट जारी गरिएको पासबाट आवगमन दिइने उनले बताए ।
मन्त्रालयले यसअघि जिल्ला बाहिरका लागि जारी गरिएका पासहरु यसअघि नै मन्त्रालयले खारेज गरिसकेको छ ।
जेठ १ गते, २०७७ - १७:५८ मा प्रकाशित